Ọ bụ kwuru na onye nchịkwa nwere ohere nile arụmọrụ nke kọmputa. Otú ọ dị, e nwere ihe ụfọdụ na nke ọbụna onye nchịkwa chere ihu nsogbu na ya mere ọ pụrụ ịbụ nnọọ na-akụda mmụọ. Ọ bụ mgbe ụfọdụ siri ike ihichapụ ụfọdụ faịlụ na si usoro nke e nwere ike ọtụtụ ihe.
Ụdị nke undeletable faịlụ na ihe mere ha nwere ike ghara ehichapụ aka.
Undeletable faịlụ bụ n'ozuzu spywares, malwares, ad wares ma ọ bụ Trojan faịlụ. Ha na-nkịtị faịlụ nke ugbu a na-eji usoro na N'ihi ya na-egbochi ya nhichapụ. E nwere ọtụtụ ihe nke na-adịghị ekwe ka faịlụ ga-ehichapụ. Ị ga-esi dị iche iche ozi dị ka:
1. nwere ike ghara ihichapụ faịlụ: Access na-agọ.
2. The faịlụ na-eji ọzọ omume ma ọ bụ onye ọrụ.
3. The isi iyi ma ọ bụ na-aga nke faịlụ nwere ike ịbụ na ojiji.
4. Enweela a nkekọrịta mebiri.
5. Odokwara disk bụghị zuru ma ọ bụ dee na-echebe ma na faịlụ bụ ugbu a anaghị eji ya.
Ndị a ozi n'ezie na-eme ya ike ihichapụ faịlụ na n'agbanyeghị otú ọtụtụ ugboro anyị na-agbalị, ndị a faịlụ-apụghị ehichapụ nanị site na ịpị Nhichapụ bọtịnụ. E nwere ọtụtụ ụzọ nke nwere ike soro ka ihichapụ ndị a ụdị faịlụ.
Mbụ otú: Iji iwu ozugbo window
Nke a-enye gị ohere ka ihichapụ undeletable faịlụ na-enweghị eji ihe ọ bụla ọzọ na-ngwa. Otú ọ dị, mkpa ka i nwere a bit nke oru ihe ọmụma iji usoro a.
Nzọụkwụ 1: Pịa na 'Malite' button na mgbe ahụ pịnye 'iwu ozugbo' ma ọ bụ 'CMD' na search igbe na pịa 'Tinye' isi.
Nzọụkwụ 2: A search N'ihi-egosi. Right pịa 'iwu ozugbo' ngosi site na search results na pịa on 'agba ọsọ dị ka nchịkwa' site na ndepụta na-egosi.
Nzọụkwụ 3: Nke a ga-ẹkedori nchịkwa larịị iwu ozugbo window nke-enye gị ka e gbuo iwu enweghị ihe ọ bụla mmachi.
The syntax nke iwu maka ihichapụ a faịlụ anya dị ka n'okpuru:
Del: anọchi Nhichapụ nhọrọ
/ F: anọchi ike ihichapụ nhọrọ
/ Ajụjụ: anọchi nnọọ mode nhọrọ.
/ A: anọchi dị iche iche faịlụ àgwà dị ka na-agụ-naanị, zoro, njikere maka archiving, wdg
/ C: anọchi gị isi mbanye. Na ọtụtụ ndị ikpe, ọ bụ "C:" mbanye
Nzọụkwụ 4: ka ihe atụ gị mkpa ka ihichapụ a faịlụ aha 'virus.exe' ugbu a na desktọọpụ, mgbe ahụ tinye iwu dị ka e gosiri na pịa 'Tinye' isi.
Nke a ga-ihichapụ faịlụ site na usoro.
Ụzọ nke abụọ: Iji FileASSASIN
FileASSASIN bụ a free omume na a na-eji ihichapụ undeletable faịlụ site na gị usoro. Ị nwere ike ibudata ya site n'inyocha ya si nchọgharị gị ma ọ bụ site na ịpị njikọ nyere n'okpuru:
Nzọụkwụ 1: Ozugbo i ebudatara FileASSASIN, na-emeghe omume ahụ site abụọ na ịpị na ya akara ngosi. Isi interface nke usoro ihe omume anya dị ka dị ka e gosiri n'okpuru:
Nzọụkwụ 2: Ugbu a pịa na Chọgharịa akara ngosi (akụkụ anọ ekara na akara ngosi na atọ ntụpọ n'akụkụ ka ide ohere) iji họrọ faịlụ na ị chọrọ ka ihichapụ.
Nzọụkwụ 3: Chọgharịa maka faịlụ ị chọrọ ka ihichapụ na mgbe ahụ okpukpu abụọ pịa ya họrọ ya. Ozugbo i nwere họrọ faịlụ ga-ehichapụ, pịa igbe n'akụkụ 'Hichapụ faịlụ' nhọrọ na họrọ ya. A-acha anụnụ anụnụ akọrọ na-egosi na nhọrọ a họọrọ.
Nzọụkwụ 4: N'ikpeazụ pịa na 'Igbu' nhọrọ ka ihichapụ faịlụ. Gị faịlụ ga ugbu a ga-ehichapụ.
Ụzọ nke atọ: Ihichapụ faịlụ aka
Otu n'ime mfe ụzọ nke ihichapụ ihe undeletable faịlụ nwere ike mere nanị site dochie ya faịlụ ndị ọzọ nke otu aha na ndọtị. Nke a nwere ike mere nnọọ mfe dị ka e gosiri n'okpuru. E were faịlụ aha 'SoftwareU' bụ m undeletable faịlụ.
Nzọụkwụ 1: Mepee ọhụrụ notepad faịlụ na gị usoro na nanị pịnye ihe ọ bụla random na ya. Ugbu a, pịa na 'File' nhọrọ wee pịa on 'Save dị ka'.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, họrọ ịzọpụta ọnọdụ nke notepad dị ka ahụ dị ka ebe undeletable faịlụ bụ ugbu a. Mgbe eme otú ahụ, na-ahọrọ ụdị nke faịlụ dị ka 'All faịlụ' n'okpuru 'Save dị ka ụdị' nhọrọ.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, pịa na undeletable faịlụ ozugbo mere na aha nke undeletable faịlụ a ga-depụtaghachiri ke 'File aha' nhọrọ. Ịgbakwunye e kwuru akara ná mmalite na ọgwụgwụ nke faịlụ aha ka e gosiri n'okpuru na click on 'Save' nhọrọ.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, a ozi ga-gbapụta arịọ 'Ị chọrọ overwrite na-eji dochie ẹdude faịlụ?' . Pịa na 'Ee' na undeletable faịlụ ga-akpaghị aka dochie ọhụrụ notepad faịlụ. Ugbu a, ị nwere ike ihichapụ notepad faịlụ site na nanị na-ahọpụta ya na ịpị 'Nhichapụ' button.
Ebe a bụ ole na ole n'ime Atụmatụ na usoro na mkpa ka ị mara banyere mgbe n'ịrụ ndị a omume.
1. Ọ na-adịkarị gwara ka nwere ihe antivirus usoro ihe omume gị usoro, nke bụ ruo ụbọchị iji gbochie gị usoro si malwares, spywares na nje virus nke ike na-enweghị isi undeletable faịlụ.
2. Ọ bụ n'ozuzu mma iji ndụmọdụ nke onye ọkachamara tupu n'ịrụ amaghị usoro arụmọrụ.
> Resource> ihichapu> 3 Ụzọ iji Hichapụ Undeletable Files na unu adịghị Maara Banyere